isibambo esisodwa isinki yokugezela yompompi chrome
I-chrome yokugezela isikulufu sokuphatha isibambo esisodwa se-WOWOW iza nesithinteli se-pop-up esifakiwe. Lesi simiso se-pop-up sakha ubumbano olulodwa ngesipikili sakho sokugezela esisodwa, ukwenza umthelela omkhulu ekhishini lakho. Lesi sitobha se-pop-up drain singasetshenziswa kalula ngomshini owodwa nje. Idinga kuphela a
ingcindezi encane yokuthi isetshenziswe. Ngenxa yomklamo wayo osebenzayo, ingakhipha amanzi kude nasendlini yakho yokugezela icwila ngokushesha nangokuthula.
 Inani eliphakeme kakhulu lemali
 Ukusebenza kahle kokugeleza kwamanzi
 Idizayini ehlukile nenhle
 Izinto zokusebenza okuphezulu
 Kufaka ikithi yokuzenzela ngokwakho
SKU: 2321501C Categories: Amanzi okugeza, Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa Tags: qeda kuphole, isikulufu esiphundu, Isandla esisodwa